Mabaaddi'ka afraad iyo kama dambaysta ah ee hagaya fikirkaada waa Xushmeynta Sharciga iyo Dulmiga Dadweynaha. Mabda 'Tani waxay ka timaaddaa Warbixinta Menlo, sidaa darteedna waxaa laga yaabaa inaanay aqoon u lahayn cilmi-baarayaasha bulshada. Warbixinta Menlo wuxuu ku doodayaa in mabda'a ah Xushmeynta Xeerka iyo Dulmiga Dadweynuhu uu ku yaalo Mabda'a, laakiin sidoo kale waxa uu ku doodayaa in hore uqalmaasho tixgelin ah. Gaar ahaan, iyada oo faa'iido-darradu ay tahay mid diiradda saareysa ka-qayb-galayaasha, Ixtiraamka Sharciga iyo Dumarka Dadweynaha waxay si cad u dhiirri-galiyaan cilmi-baarayaasha in ay qaataan aragti ballaaran iyo in ay ku daraan sharciga ku jira tixgelintooda.
Warbixinta Menlo, Ixtiraamka Sharciga iyo Dumarka Dadweynuhu waxay leeyihiin laba qaybood oo kala duwan: (1) u hoggaansamida iyo (2) xisaabtan daahfuran. Xaq u yeelashada micnaheedu waa in cilmi-baarayaashu ay isku dayaan inay aqoonsadaan oo ay adeecaan sharciyada, heshiisyada, iyo shuruudaha adeegga. Tusaale ahaan, waafaqsanaanta macnaheedu waxa weeye in cilmi-yare oo ka fekeraya in la jarayo content-ka website waa inuu aqriyaa oo tixgeliyaa heshiiska adeegga shuruudaha ee boggaas. Hase yeeshee, waxaa dhici karta, inay jiraan xaalado ah in loo oggol yahay in lagu xadgudbo shuruudaha adeegga; Xusuusnow, ixtiraamka Sharciga iyo Danta Dadweynuhu waa mid ka mid ah afar mabda '. Tusaale ahaan, hal mar, Verizon iyo AT & T labaduba waxay leeyihiin shuruudo adeeg oo ka hortagaya macaamiisha iyaga oo dhaleeceeyay (Vaccaro et al. 2015) . Uma maleynayo in cilmi-baadhayaashu aysan si toos ah ugu xidhnayn heshiisyada adeegga ah. Fikrad ahaan, haddii cilmi-baarayaasha ku xad-gudbaan heshiisyada adeegga, waa inay si cad u sharraxaan go'aankooda (eeg tusaale ahaan, Soeller et al. (2016) ), sida soo jeedinaysa xisaabtan daahfuran. Laakiin furfurnaantan ayaa laga yaabaa inay soo bandhigto cilmi-baarayaasha inay ku daraan khatar sharci ah; ee Maraykanka, tusaale ahaan, Sharciga Khayaamada Xadgudubka iyo Xad-gudubka Kumbuyuutarka ayaa ka dhigi kara sharci darro in lagu (Sandvig and Karahalios 2016; ??? ) heshiisyada adeegga (Sandvig and Karahalios 2016; ??? ) . Dooddan gaaban ayaa muujinaysa, oo ay ka mid tahay u hoggaansamida ujeedooyinka anshax-marinta waxay kordhin karaan su'aalaha adag.
Marka lagu daro fulinta, Xushmeynta Sharciga iyo Dumarka Dadweynuhu waxay sidoo kale dhiirigelinaysaa xisaabtan ku saleysan daahfurnaanta , taas oo macnaheedu yahay in cilmi-baadhayaashu ay tahay inay caddeeyaan ujeedooyinkooda, hababka iyo natiijooyinka dhammaan marxaladaha baaritaankooda ayna qaadaan masuuliyada ficilladooda. Siyaabo kale oo looga fikiro xisaabtan ku salaysan daahfurnaanta waa in ay isku dayayso in ay ka hortagto bulshada cilmi-baarista in ay sameyso waxyaabo qarsoodi ah. Xisaabtan ku salaysan daahfurnaanku waxay u sahlaysaa doorka ballaadhan ee dadweynaha doodaha anshaxa, taas oo muhiim u ah sababaha anshaxa iyo ficil ahaanba.
Dalbashada mabda'a Xushmada Sharciga iyo Dulmiga Dadweynaha sedexdaas daraasaddood ee la tixgelinayo halkan ayaa muujinaya qaar ka mid ah culimada cilminafadeed ee wajahaya marka ay timaaddo sharciga. Tusaale ahaan, Grimmelmann (2015) ayaa ku dooday in Noocyada Caadifadeed ee laga yaabo inay sharci darro ku yihiin Gobolka Maryland. Gaar ahaan, Maryland House Bill 917, ayaa sannadkii 2002 soo gashay, ilaalinta Sharciga Caalamiga ah ee dhammaan baaritaannada lagu sameeyey Maryland, oo ka madaxbannaan ilaha dhaqaalaha (khabiiro badani waxay rumaysan yihiin in Cudurka Dabiiciga ah uusan ku xirnayn Sharciga Guud ee Sharciga Federaalka sababtoo ah waxaa lagu qabtay Facebook , hay'ad aan ka helin lacagaha cilmi-baarista ee dowladda Mareykanka). Si kastaba ha ahaatee, aqoonyahannada qaarkood waxay aaminsanyihiin in Maryland House Bill 917 ay tahay mid madaxbannaan (Grimmelmann 2015, 237–38) . Hirgelinta cilmi-baarayaasha bulshadu maaha garsoore, sidaa daraadeed maaha qalab lagu fahmo oo lagu qiimeeyo dastuuriga ah shuruucda dhammaan 50-ka dowladaha Maraykanka ah. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah mashaariicda caalamiga ah. Ku dhiirigeli, tusaale ahaan, ka qaybgalayaasha kaqaybqaameeya 170 dal, taas oo u hoggaansamaysa sharciga waafaqsan si adag. Marka laga jawaabayo jawiga sharciga ah ee qarsoodiga ah, cilmi baarayaashu waxay ka faa'iideysan karaan dib-u-eegidda anshax-marinta shaqadooda, labadaba sida talo ku saabsan shuruudaha sharciga ah iyo ilaalin shakhsi ah haddii ay cilmi-baaristu si aan sharciga waafaqsanayn.
Dhinaca kale, dhammaan saddexda daraasadood oo dhan waxay daabaceen natiijooyinkooda joornaalada akadeemiyadda, taasoo awood u siinaysa xisaabtan daahfuran. Xaqiiqdii, Falanqaynta Dareenka ayaa lagu daabacay foomka furan ee furan, sidaas darteed bulshada cilmi-baarista iyo dadweynaha ayaa la wargeliyay-ka dib xaqiiqda-ku saabsan qaabeynta iyo natiijooyinka cilmi-baarista. Mid ka mid ah habka ugu dhaqsiyaha badan ee lagu qiimeyn karo xisaabtanka ku salaysan daahfurnaanta waa inaad is-waydiiso: miyaan raali ku noqon karaa haddii nidaamyada cilmi-baarista lagu qoray bogga hore ee wargeyska magaalada? Haddii jawaabtu tahay maya, taasi waa calaamad muujinaysa in qorshahaaga cilmi-baarista uu u baahan yahay is-beddel.
Ugu danbeyntii, Warbixinta Belmont iyo Warbixinta Menlo wuxuu soo jeediyay afar mabda 'oo loo isticmaali karo in lagu qiimeeyo cilmi baarista: ixtiraamka dadka, faa'iidada, cadaaladda, iyo ixtiraamka sharciga iyo danta guud. Codsigaan afartaan mabaadiida ah ee ku dhaqanka ma aha marwalba, waxana ay ubaahnaan kartaa isku dheelitir adag. Tusaale ahaan, marka la eego go'aanka ah in laga doodo kaqaybgalayaasha Fikradaha Shucuurta, waxaa laga yaabaa in loo tixgeliyo in ixtiraamka Dadku ay ku dhiirri-galinayaan wax-ka-qabashada, halka Caqlicelintu ay niyad-jebineyso (haddii dood-shaqsigu uu naftiisa waxyeelayn karo). Ma jiro hab wax ku ool ah oo lagu miisaamayo mabaadi'da tartanka, laakiin afarta qodob ayaa ka caawiya sharraxaadda ganacsiyada, soo jeedinta isbeddelka naqshadaynta cilmi-baarista, iyo in ay cilmi-baadhayaashu u oggolaadaan inay sharaxaad ka bixiyaan sababahooda midba midka kale iyo dadweynaha.